I-China YF-H-211 Pink Velvet Nightstands 2 Drawers Wood Nightstand Bedside Table Gold Base Umkhiqizi nomhlinzeki | Yifan
Amasethi egumbi lokuhlala
Itafula Eliseduze kombhede
Ama-YF-H-211 ama-Pink Velvet Nightstands ama-2 Drawers Wood Nightstand Embhedeni Wethebula Lesisekelo Segolide
Izinto ezixutshiwe zinomzuzwana, kanti iMorrison Leather Nightstand ixuba kahle ingaphandle lesikhumba nemilenze yensimbi nokudonsa. Amadilowa amabili ashiya isikhala esiningi sama-headphone, izifihla-buso zamehlo, ama-notepads nokuningi.
EZIPHUMA Isitoreji, Odonsa
ISITAYELA Imisebenzi eminingi nesimanje
IZINTO High isicwebezelisi MDF ibhodi + Velvet + Umlenze insimbi engagqwali
ITHEBULA DIMENSION 400mmL x 400mmW x 500mmH
sisekela i-OEM ngosayizi
IZIBUKO ZIHLANGANISIWE YEBO
Iwaranti I-3 Year Limited (yokuhlala), i-1 Year Limited (ezentengiselwano)
Intengo ye-EXW: US $ 0.5 - 9,999 / Piece (khuluma nesevisi yamakhasimende)
Min.Order Ubuningi: 30Pieces
Amandla Wokunikezela: 10000 Piece / Pieces per Month
Inkokhelo Imigomo: T / T.
Isitayela Sesimanje: Okufaka umugqa ohlanzekile ohlotshiswe ngesisekelo segolide esimise okwe-U, kwakha umoya wokunethezeka wanamuhla ekhaya lakho.Umbala opinki utholakala ngokugoqa izandla, ngakho-ke kuzoba nokuhlukahluka kombala / kwethoni engxenyeni ngayinye. Itafula eliseceleni kombhede lakhiwe ngokugcwele esikhunjeni se-faux sendawo ebushelelezi enezinkinobho ze-crystal ziyaxoshwa kulo lonke ukudala umphumela wokubonwa oku-blink-blink
Lelibhodwe lasebusuku elisongwe ngesikhumba linamadrowa amabili wokudonsa, ahlala emilenzeni eyisikwele e-tapered. Kutholakala kunoma yikuphi ukuphela, usayizi, noma ukumiswa. I-hardware yokubamba inothi kufanele inikezwe futhi ivumele ukwenziwa ngokwezifiso okuhlukile.
Isitoreji Esanele: Woza ngamadilowa ama-3, inikeza indlela esebenzayo nenesitayela yokuhlinzeka ngokugcina omagazini, izimonyo, iselula, njll.
I-Easy-To-Use: Ngomshini ohlukile wokuvula ukwakheka, le nightstand inikeza umsebenzi ongenamsebenzi nentelezi ethile futhi.
Kwenziwe ngesandla kwe-MDF ngemilenze yensimbi; I-MDF yizinkuni ezakhiwe ezinikeza amandla ahlukile futhi iqinisekise ubuqotho besakhiwo sokugqoka ngokuhamba kwesikhathi.
Umbuso Omkhulu: Indawo ephezulu yanele isibani sombhede newashi le-alamu. Amadilowa ama-2 anika indawo eningi yezinto zakho.
Ukwakhiwa Okuqinile: Inhlanganisela ephelele ye-velvet ecebile, ukhuni oluqinile nensimbi engagqwali, le ndawo yokuma ebusuku iqinile futhi ihlala isikhathi eside impilo ende.
400mmL x 400mmW x 650mmH
Ngiyethemba uzokujabulela ukuklanywa komkhiqizo. Ngaphezu kwalokho, inesitayela esinsundu esimnyama ongakhetha kuso. Ifanele kakhulu abasebenzi basehhovisi jikelele, umbala ungcono ukuwunakekela!
Langaphambilini I-YF-H-210 Ithebula Lamanje Lokunethezeka Elimhlophe Neligolide le-3 Drawers Bedroom Nightstand Square Bedside Table
Olandelayo: I-YF-H-212 h Nightstand Upholstered Bedside Table ne-Drawer Gold Metal Base
Ithebula Laptop Lombhede
Ithebula Lesheluli Lombhede
Ifenisha Yokulala Yethebula Lombhede
Ithebula Lombhede Wensimbi
Ithebula Lombhede Wokunethezeka
Ithebula Lamanje Lombhede
Amatebhe Wombhede Ithebula
Ithebula Lokuma Ebusuku Lombhede
I-YF-H-201 Home Nightstand Side Ithebula elimhlophe
YF-H-209 Modern 3 ekhabetheni White Black Lacquer N ...
YF-H-204 White Golden Qeda Nightstand Modern ...
I-YF-H-203-1 lesikhumba Amalowdi amabili avulekile ebusuku
I-YF-H-208 2 Ithebula Le-Nightstand Ithebula Lesimanje Lesikhathi
YF-H-206 Side Ithebula nge Self Ukuvalwa ekhabetheni La ...
Igumbi 508, North Of Yanzhao Street, Zhengding County, Shijiazhuang, Hebei, China